ပြည်ခိုင်ဖြိုး အစိုးရ ကာလအတွင်း လုပ်ရမည့် အလုပ်များကို စံပြအဖြစ် လုပ်ပြခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တ? - Yangon Media Group
ပြည်ခိုင်ဖြိုး အစိုးရ ကာလအတွင်း လုပ်ရမည့် အလုပ်များကို စံပြအဖြစ် လုပ်ပြခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တ?
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ(USDP)အနေဖြင့် ၎င်းတို့အစိုးရကာလအတွင်း လုပ်ရမည့်အလုပ်များကို စံပြအဖြစ် လုပ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ယခုအချိန်တွင်လည်း အတိုက်အခံကောင်းအဖြစ်ကို နမူနာပြလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရုံးကုန်းကျေးရွာတွင် ကျင်းပသည့် ပါတီဝင်စုပေါင်းအဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲ၌ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးက ပြောဆိုသည်။
”ကျွန်တော်တို့ အတိုက်အခံလုပ်တဲ့အခါမှာ အစိုးရလုပ်သမျှကို အကုန်ဖျက်ရမယ်။ ဆန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတာ မလုပ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းပြန် ကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံ အဲဒီလို မလုပ်ပေမယ့် တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကျတော့ အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေက အကုန်လုံးရပ်ထားတာတွေများ တယ်။ တိုင်းပြည်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရကာလမှာလဲ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို စံပြအဖြစ်နဲ့ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီနေ့အတိုက်အခံကာလမှာလဲပဲ အတိုက်အခံဆိုတာ ဟောဒီလိုနေရတယ်။ ဟော ဒီလိုပြောရတယ်။ ဟောဒီလိုလုပ်ရတယ်။ ဒီအတိုင်း လုပ်နေတာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နောင်အချိန်ကာလ မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ် ပြက်အတွင်းမှာ ဒါ ဒီမိုကရေစီခေတ်နော်။ စောစောက ပြောသလို နိုင်ငံသားတွေ သူ့ဟာသူ နိုင်ငံချစ်စိတ်တွေ၊ မျိုးချစ်စိတ်တွေ၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေ တကယ်နိုးကြားလာတဲ့အချိန်ကြရင် ကျွန်တော်တို့အလှည့် ပြန် ရောက်မှာပဲ။ ဒီအချိန်ကျရင် ကိုယ်က အတိုက်အခံတုန်းက လူတွေကို မြှောက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ ကိုယ့်အစိုးရဖြစ်မှ ပြန်ပြီးညည်းတွားနေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲ အတိုက်အခံဆိုတာ ဟောသည်ကဲ့သို့လုပ်ရသည်ဆိုတာကို ကျွန် တော်တို့ နမူနာပြတာ”ဟု ဦးသန်းဌေးက ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေဖြင့် တစ်သက်လုံး အတိုက်အခံအဖြစ်သွားနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်ကို အချိန်မရွေး တာဝန်ယူရမှာဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် တကယ် ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည်သူများ၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ပြည်သူလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့်ခေတ်၌ ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှသာရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါတီကိုကြည့်၍ လူကိုမကြည့်နှင့်ဟုဆိုသည့်ခေတ်များ ကုန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုရွေးချယ်ခဲ့မှု၏ အကျိုးဆက်များသည် နေရာအများ၌ လူထုအသိဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
”ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေ စာအုပ် တွေထုတ်ထားတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားတာတွေရှိတယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ပျံ့နှံ့အောင် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရင် အားလုံးက လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့က တိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးကိုဖျက်တဲ့လူတွေ မဟုတ်လို့ အမျိုးဘာသာသာသနာ လွတ်လပ် ရေးအချုပ်အခြာအာဏာတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး အဲဒါတွေအားလုံးကို ဟောဒီ ခေါင်းပေါ်မှာ တင်ပြီးတော့ တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ် ဟာ မမှားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကား တွေမမှားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ မမှားဘူး။ သမိုင်းသက်သေရှိပါတယ်။ ဒါတွေ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အားလုံးက အောင်မြင်လိုစိတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားရင် တိုင်းပြည်ကို တာဝန်ယူဖို့ အခက်အခဲမရှိပါဘူး”ဟု အထက် ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပွဲများ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာဟု ဆို
နိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရည်ရွယ်၍ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် အလုပ်သမားေ
မြဝတီတွင် လေယာဉ်ပစ်ကျည် ၁ဝ၂ဝ တောင့် သိမ်းဆည်းရမိ
စေ့စပ်တဲ့ အကြောင်း အတည်ပြုလိုက်တဲ့ လူးဝစ္စ သွန်မဆင်
မည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ မထိခိုက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ကာကွယ်ရေးနှင့်ြ??
‘စီနီယာတွေရဲ့ ရုပ်ရှင် မရိုက်ခင်မှာ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကိ??